Pull-Out မှုတ်ဆေးနှင့်အတူ Chrome မီးဖိုချောင် Faucet နစ်မြုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / Faucets Down ဆွဲ / WOWOW Chrome မီးဖိုချောင်မှရေဆေးမှုန့်ဖြင့်ဆေးကြောပါ
WOWOW Chrome မီးဖိုချောင်မှဆေးသုတ်သည့်အခိုးရေငွေ့ဖြင့်ရေဆေးပါ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.955ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 37 ဖောက်သည် ratings
Buy Faucet Single Handle သည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ဆွဲငင်အား faucet ၏ဆွဲယူလုပ်ဆောင်မှုကိုအဓိကအားဖြင့်ဆွဲငင်အားဘောလုံး (ဆွဲငင်အားပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်မြေထုဆွဲအားတူ) ဟုခေါ်သည်။
2310800C installation ကိုညွှန်ကြားချက်
မီးဖိုချောင်ကရောနှောစက်ကို 2310800C ထိပုတ်ပါ
ဂန္ထ ၀ င်ခရုမ်းကိုရှာဖွေနေပါသလား၊ နောက်ထပ်မရှာပါနှင့်။ WOWOW သည်သင်စျေးကွက်ထဲတွင်တွေ့ရမည့်အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်နှင့်ခေတ်ပြိုင်ဆွဲချမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောစက်များထဲမှတစ်ခုကိုပေးသည်။ WOWOW သည်အရည်အသွေးမြင့်သောမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောမှုများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိနိုင်ပုံကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်ငွေရေးကြေးရေးတန်ဖိုးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်း၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကမည်သည့်မီးဖိုချောင်တွင်မဆို WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဟာဂန္ထဝင်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းတစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ်ခေတ်မီမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွက်ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ ဒီမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုထိလိုက်ရုံနဲ့လိုက်ဖက်ညီမယ်။
WOWOW ၏ဒီဇိုင်နာများသည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်စီမံသည့်အချိန်တိုင်းမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုလူအများစုအံ့အားသင့်စေသည့်ထိပုတ်ခြင်းများကိုဆွဲချသည်။ WOWOW သည်မည်သည့်မီးဖိုချောင်တွင်မဆိုထူးခြားမှုဖြစ်စေသည့်မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်သောမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ရန်သာလိုလားသည်။ အချို့သောလူများကမည်သည့်မီးဖိုချောင်တွင်မဆိုကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုပြုလုပ်သောကြောင့်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်း၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့တွက်တွက်ချက်သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါကမည်သည့်မီးဖိုချောင်တွင်မဆိုအထူးထိတွေ့နိုင်သည်။ WOWOW မှဒီဇိုင်နာများသည်ဤအရာကိုအလွန်အမင်းသတိပြုမိကြသည်။ WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများထံရောင်းချခြင်းသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။
WOWOW ၏ဆွဲချမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါရေရေပိုက်အလွယ်တကူမီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါထဲကဆွဲထုတ်နိုင်သည့်အားသာချက် feature ပါ။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြား 15 မှ 23 လက်မနှင့်သင်၏ flushing increasesရိယာတိုးပွားစေပါသည်။ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောရေပိုက်ကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်ပြီးသင်၏အဝတ်လျှော်areaရိယာကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သင်၏မီးဖိုချောင်စွန်းတိုင်းထောင့်တိုင်းသည်သင်၏ပုံမှန်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်စက်ဖြင့်ရောက်ရှိရန် ပို၍ ခက်ခဲသောကြောင့်ယခုအလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ရေပိုက်ကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်မူလအနေအထားသို့အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်။
WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုထိပုတ်ပါ၏နောက်ထပ်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည့်ဆုံလည်ထိပုတ်ပါ။ ဤသည်ကနှစ်ဆမီးဖိုချောင်စုပ်များအတွက်အထူးသဖြင့်စံပြမီးဖိုချောင်ကိုရောနှောထိပုတ်ပါချစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မီးဖိုချောင်စုပ်မှတစ်ခုသို့နောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ WOWOW သည်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီများတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှဤချပ်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုထိပုတ်ပါ။ WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုအသာပုတ်သောအခါသင်ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
WOWOW ၏ဆွဲချသောမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါများအားအရည်အသွေးမြင့်လီဗာတစ်ခုတည်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ပူနွေးသောရေအေးကိုစံပြအပူချိန်မရောက်မချင်းလက်တစ်ချောင်းဖြင့်ရောစပ်နိုင်သည်။ ထိုရေပမာဏကိုလည်းသက်ဆိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အခြားမီးဖိုချောင်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လက်တစ်ချောင်းကိုအမြဲတမ်းထားရှိမည်။ ယိုကင်းသည့်ကြွေသည့်အရာတစ်ခုသည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံသည်။ ယင်း၏တံဆိပ်ခတ်မှုကြောင့်လီဗာသည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေပြီးမည်သည့်ရေမျှမယိုယွင်းစေဘဲရေရှည်အသုံးပြုရန်သေချာစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရေအပူချိန်ကိုတိတိကျကျထိန်းညှိနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်မည်သည့်တုတ်ကွေးမှမပါဘဲ
WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောသောဘောင်းဘီများသည်သုံးဖက်မြင်မီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါ။ ပုံမှန်ရေစီးဆင်းမှုစနစ်အပြင်, သင်သည်ရေမှုန်ရေမွှားအသုံးအဆောင်သို့မဟုတ် Aqua-Blade စနစ်ကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤ aqua-blade mode သည်သင့်အားအလွန်အားကောင်းသောရေဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ပြားများသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်တွင်စုပ်ယူခြင်းမှအစားအစာအပျက်အစီးများအားလုံးကိုအလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်သည်။ ဤသည် function ကိုစျေးကွက်အတွက်ထူးခြားသည်နှင့်ကျိန်းသေသည်အခြားဆွဲမီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါကျော် WOWOW ၏ဆွဲချမီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောကိုအသာပုတ်ထားသောရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းပေါ်တွင်အလွယ်တကူနေရာချနိုင်သည့်ခလုတ်ကိုထိရုံဖြင့်ရေလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်ရိုးရှင်းစွာပြောင်းနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း WOWOW သည်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါသောအရည်အသွေး၏အရေးပါမှုကိုကောင်းစွာသိရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများထက်ကျော်လွန်သောအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။ ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင် electroplating ဖြစ်စဉ်များ၊ Neoperl aerator ကဲ့သို့ကမ္ဘာကျော်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အစိုင်အခဲသတ္တုပစ္စည်းများကိုစဉ်းစားပါ။ အကောင်းဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်သင့်အားမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီတိုများကို ၃ နှစ်ထုတ်ကုန်အာမခံပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူသူအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောငွေတန်ဖိုးမြင့်မားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည်ဘဝအတွက်သစ္စာရှိဖောက်သည်များဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်။
ဖယ်ထုတ်။ ရနိုင်သည့်အရည်အသွေးမြင့်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီ၏ခေါင်းကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ဤရောနှောထားသောရေမှုတ်ဆေးခေါင်းကိုအလွယ်တကူအသာပုတ်။ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အပြင်ရေစုဆောင်းသည့်အချိန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ WOWOW ၏မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောသောဘောင်းဘီများသည်ဖိအားမြင့်စနစ်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် silica gel ရေပိုက်သည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေပြီးသက်တမ်းရှည်စေသည်။
WOWOW ၏ဆွဲချမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါ 1 သို့မဟုတ်3အပေါက်မီးဖိုချောင်ကုန်းပတ်၌ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီတိုများကိုတပ်ဆင်ထားသောကုန်းပတ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းအစုံအလင်ပါရှိသည်။ သတ္တုကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားသည့်အဖုံးပြားဖြင့်အပေါက်အားလုံးဖုံးထားသဖြင့်သင့်အားအလှဆင်ထားသောမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောမှုအောက်သို့ဆွဲချထားနိုင်သည်။ ဤတပ်ဆင်ရန်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုတပ်ဆင်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်အသာပုတ်ပါ၊ စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောဘောင်းဘီတိုကဲ့သို့သောဆွဲအားကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကသင်ပြီးစီးနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်ထားသောဗီဒီယိုဖြင့်မိနစ် ၃၀ ထက်မနည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားစျေးကြီးသောရေပိုက်သမားအားကယ်တင်လိမ့်မည်။
သင်ဤမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါဝယ်ယူသောအခါ WOWOW ကကမ်းလှမ်းသောအခမဲ့သုံးနှစ်အာမခံကာလအပြင် WOWOW သည်သင့်ကိုလည်းရက် ၉၀ ငွေပြန်အမ်း - အာမခံချက်ကိုလည်းပေးသည်။ ဤမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောနေသောဘောင်းဘီများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိသောငွေတန်ဖိုးကိုသင်သဘောမကျပါကမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောခြင်းကိုထိတွေ့မှုမရှိဘဲပြန်ပေးနိုင်သည်။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းမျှမပါဘဲအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရလိမ့်မည်။
မည်သည့်မီးဖိုချောင်ကိုမဆို wow-factor ပေးပါ
· Classic နှင့်ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း
·မြင့်မားသောဖိအား aqua-blade အပါအဝင်ရေ Modes 3
· Do-it-yourself installing kit အပါအ ၀ င်
·ရက်ပေါင်း ၉၀ ငွေပြန်အမ်းခြင်း
SKU: 2310800C Categories: မီးဖိုချောင် faucets, Faucets Down ဆွဲ Tags: ၂၁ ပေါက်, Chrome ကို, ဆွဲချပါ
54 × 28 စင်တီမီတာ× 7
နည်းလမ်းသုံးမျိုး: Sweep Mode / Stream Mode / Spray Mode
ငါတို့တိုတောင်းသော / နိမ့် faucet coz အစားထိုးမြင့်မား / အရပ်ရှည်ရှည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းအားလုံးကောင်းအိုးများကိုလျှော်ရန်ခက်ခဲနေသည်။ အရာရာအားလုံးကောင်းမွန်သည်။ အစားထိုးလိုက်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာအပူနှင့်အအေးအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့မှာကလေးတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအပြာရောင်ရေပိုက်ကိုပူအဆို့ရှင်နဲ့အနီရောင်ရေပိုက်နဲ့အဆို့ရှင်ချိတ်ဆက်ထားတာပါ။ တခြားအရာအားလုံးကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
R ကို *** y က2020-04-07
ကျွန်တော့်မီးဖိုချောင်သုံးရေကန်ဟောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုသည်။ စျေးနှုန်းကကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်မဝံ့မရဲမ ၀ ယ်ခဲ့ဘူး။ pull-down မှုတ်ဆေးသုံးစက်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ တစ် ဦး ကအလွန်ကျေနပ်စရာသဘောတူညီချက်!
တစ်ဦးက *** ဌ2020-04-08
ကိုယ့်မီးဖိုချောင်မှာ faucet ကို install ပြီးတာနဲ့။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကိုခေါ်စရာမလိုပါ။ ပက်ဖြန်း nozzle ကိုဆွဲယူ။ လက်ကိုင်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။ ငါ့ထောက်ပံ့ရေးဆက်သွယ်မှုများသည်ဒီယူနစ်နှင့်အရွယ်အစားတူသည်။ စျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
ဒီ faucet ကို Morn, Delta စသည့်နာမည်ကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခံစားမှုနှင့်အသွင်အပြင်သည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဒီ faucet ရေဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ကို C *** တစ်ဦး2020-04-10
ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကပိုပြီးစျေးကြီးတဲ့ faucets တွေလိုကောင်းတယ်။ ငါတို့ faucet ကိုမီးဖိုချောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးထိုအချိန်ကတည်းကအပြစ်ကင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အပြီးသတ်ဆေးကြောရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောမှုတ်ဆေးတပ်ဆင်ထားပြီးမှုတ်ဆေးသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါတို့ဒီ faucet အသစ်ကိုကြိုက်တယ်
M က *** y က2020-04-12
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားလုံးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ငါတို့ဟာဒီ faucet ကိုစမ်းကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဆိုပါ $$$ အဘို့အခွင့်အလမ်းရကျိုးနပ်သလိုပဲ။ ဝိုး! ကျနော်တို့ဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ စျေးနှုန်းအတွက်အရည်အသွေးကိုမယုံနိုင်သေးပါ။ ဘတ်ဂျက်နဲ့မတူအောင်အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တဲ့သူတွေကိုဒီ faucet ကိုကျွန်တော်အကြံပေးလိမ့်မယ်။ ဂရိတ်တန်ဖိုး, ကြီးကြည့်။ ဂရိတ် function ကို။
တစ်ဦးက *** ဋ2020-04-14
အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်းအဘို့ကြီးသော faucet! ငါမကြာသေးမီကငါ့ယောက္ခမများအတွက် faucet ဒီ faucet ၏စျေးနှုန်းနှစ်ဆခန့်များအတွက်ကြီးမားသော box ကိုဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်ကနေဝယ်လိုက်တယ်။ ဒီ faucet ၏အရည်အသွေးနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့သောယခင်ထက်သာလွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာပေါက်အတည်ပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာရေလိုင်းများနှင့်အတူကြွလာ - အမြဲတမ်းသင်၏ရေလိုင်းများကိုအစားထိုး !!! အလေးချိန်ပူးတွဲတပ်ဆင်ရန်လည်းလွယ်ကူသည်။ ယေဘုယျအား faucet နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်။
F ကို *** ဃ2020-04-15
ငါ့အိမ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ဒီ faucet ကိုငါလိုအပ်တယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည် မကျေနပ်စရာဘာမှမရှိဘူး၊ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ ငါပန်းကန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ပန်းကန်ဆေးစက် - ဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်သောပစ္စည်းများအဘို့အရုံချင်တဲ့အခါငါတကယ်တော့ကောင်တာပေါ်တွင်နေရာအများကြီးအများကြီးလွတ်မြောက်စေသည်။
K သည် *** y က2020-04-21
ငါစျေးနှုန်းအပေါ်အနည်းငယ်သံသယကြီးနှင့်တကယ်တော့သူကနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်ခဲ့။ စျေးပေါသောပိုက်နှင့်ပတ်သက်သောလ်တာများကွဲအက်နေခြင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဒေါ်လာ ၂၀ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၃၀ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ပျက်စီးမှုကိုထောင်နဲ့ချီတဲ့မင်းအတွက်အသုံးချမှာပါ။ သို့သော်ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်ပါ! ကျွန်တော့်ရဲ့ American Standard အမှတ်တံဆိပ် faucet ဟာလည်ချောင်းမှာသံချေးကနေကျိုးပဲ့သွားတယ်။ အဆိုပါ gasket အချိန်အတန်ကြာပေါက်ကြားခဲ့ကြရတယ်, နှင့် screw နှစ်ခုငါ့ကိုကိုလည်းချွတ်။ ငါရေဟောင်းလမ်းကြောင်းဟောင်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ထွက်ရရန်ကျန် faucet ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကကျွန်မအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ၊ ငါခံနိုင်ရည်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမျှော်လင့်နေတယ်။ သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒီကို install ချောမွေ့ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စုပ်ကအပေါက်သုံးပေါက်ရှိတယ်၊ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်ရသောပါးလွှာသောပလပ်စတစ်သူတွေကိုအစားအခြေခံပြားမြှုပ် gasket ကြိုက်တယ်။ ငါအမှုအရာဆင်း screwing နေစဉ်သင်မြှုပ်အမှန်တကယ်အမှုအရာတက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်မျက်မှောက်၌ကွယ်ပျောက်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီဟာငါ့အဟောင်းလိုသံချေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးသေချာတယ် ငါအရမ်း finish ကိုကြိုက်တယ်, ဒါကြောင့်သူကအစက်အပြောက်ခံနိုင်ရည်ကြောင်းကိုကြော်ငြာမပါဘူးဒါပေမယ့်သူကတကယ်တော့ရေအစက်အပြောက်သို့မဟုတ်လက်ဗွေရာမရ။ ဒါ့အပြင်နီကယ်မဟုတ်သောကြောင့်သံမဏိဖြစ်နိုင်သလား။ မသေချာပေမယ့်ဒီဈေးနှုန်းမှာကြည့်ရတာမမျှော်လင့်ဘဲကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်မှာဟင်းခတ်ပန်းကန်များကိုဆေးကြောရန်အတွက်ရေကိုစုတ်ချလိုက်သည့်အခါအနည်းငယ်သောအပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စုပ်သည်ပါးလွှာသောသံမဏိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါပစ္စည်းတွေကိုမကြမ်းတမ်းဘူးဒါကြောင့်ငါအရမ်းစိတ်မပူဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟင်းလျာတွေကိုလုပ်နေတုန်းစိတ်ထဲမှာနောက်ကထားလိုက်တာ။ (အမှု၌သာသတိထားပါ။ )
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောချင်ဘူး။ သင်သည်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်သေတ္တာစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ... ၁၅၀ ... ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကိုပိုက်ဆံတစ်ရွက်တွင်အဘယ်ကြောင့်သုံးရသနည်း။
S က *** င2020-05-04
ဤထုတ်ကုန်ကိုမ ၀ ယ်မီဤကုန်ပစ္စည်းကိုယူဆောင်လာကြသောအခြားဖောက်သည်များထံမှမကောင်းသောအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ (၃ ရက်သာသုံးထားတာ) အရာအားလုံးဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, ငါအနည်းငယ်တပ်ဆင်နှင့်အတူရုန်းကန်ပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်၏အမှားမှာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ညွှန်ကြားချက်တွေကအရမ်းရှင်းပါတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ပိုက်အဟောင်းတွေအားလုံးကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ။ ငါအတားအဆီးကျော်သွားပြီနှင့်တစ်ပြိုင်နက် faucet တပ်ဆင်မှုအသစ်သည်အလွန်လွယ်ကူသွားသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်းအတာအထိကျယ်ပြန့်သောရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောဖိအားရှိသည်။ သို့သော်၊ “ stream” ဆက်တင်အပေါ်ဖိအားအနည်းငယ်နိမ့်ပုံရသည်။ ဒီဟာက faucet နဲ့ငါ့ရေထောက်ပံ့မှုပြwithနာလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျယ်ပြန့်မှုန်ရေမွှား setting ကိုအပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုနှစ်သက်အဖြစ်ကြီးမားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုတန်ဖိုး၊ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်အလွန်အမင်းအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောင်အနာဂတ်တွင်ပြproblemsနာများရှိပါကကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုနောက်ဆုံးသတင်းများဖြင့်ပြန်လည်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
M က *** င2020-05-19
သင်နေရာတစ်ခုငှားရမ်းပါကဤသည်ပုံမှန်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်အတူပါလေ့မရှိသောပုံမှန်စုပ်ယူသည့်ရေပိုက်မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်မထွက်ခွာမီ faucet အဟောင်းကိုပြန်ထည့်နိုင်သည်။ ဤသည် faucet, အဖွင့်ဖို့စူပါလွယ်ကူသောကြောင့်အားလုံးမှာအချိန်မ hubby ယူခဲ့ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်နှင့်လာသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေစုပ်စက်တွင်ပက်ဖျန်းစက်မရှိသောအပြင်ရေစုပ်စက်တစ်လုံးသည်ရေထဲတွင်အလွန်နီးကပ်စွာထိုင်နေသောကြောင့်ရေစုပ်စက်တွင်ပန်းကန်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုဆေးကြောရန်ခက်ခဲသည်။ ဤသည် faucet ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုအခန်းပေးခြင်းနည်းလမ်း WAY ပိုမိုမြင့်မားတက်ခါးဆစ်အပြင်ပေါင်းခေတ်မီကာလ၌ရှိသမျှသော faucet / နစ်မြုပ်မှုအတွက်စံဖြစ်သင့်သောပက်ဖျန်းရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူစေသည်၊ ငှားရမ်းခမှထွက်ပြီးငွေသွင်းလိုလျှင်ထွက်သွားရန်လွယ်ကူသည်။
S က *** y က2020-05-22
များသောအားဖြင့်ဒီ faucets တွေဆွဲတဲ့အမျိုးအစားက homedepot နဲ့ Lowes တို့မှဒေါ်လာ ၁၀၀ + ဖြစ်လို့ဒါကအရည်အသွေးကောင်းပါလိမ့်မယ်။
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသာစုပ်တံအောက်ရှိတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ သင့်တွင်အားကောင်းသည့်ဝက်အူလှည့် (သို့) ပေါ့ပါးသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုရှိပါကဤအရာသည်ပြanနာမဟုတ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူသည်အချိန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီးအခြားငှားရမ်းခအတွက်ထပ်မံ ၀ ယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်သေချာပေါက်ကြည့်မည်။
အခြားယူနစ်အတွက်ဒုတိယတစ်ခုဝယ်ယူပြီးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးနစ်မြုပ်မှုအောက်ရှိ mounting screw မ်ားတင်းကျပ်ရန် power drill ဖြင့်မိနစ် ၃၀ ခန့်ကိုယူခဲ့သည်။
ငါတို့နစ်မြုပ်နေတာကနက်ရှိုင်းတယ်။ ငါက2settings- စီးနှင့်မှုန်ရေမွှားရှိကြောင်းတကယ်ကြိုက်တယ်! ငါတစ်နာရီအောက် (ဒီပြတ်တောက်နှင့်အတူ) ဒီကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ သော့ခတ်ကော်လာတွင်အပေါက်များရှိပြီး၎င်းကိုရေပိုက်များမတက်ဘဲ ဆက်၍ သွားနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရန်ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုမှာရေပိုက်နှင့်အပြာရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ဖြင့်အမှတ်အသားပြုထားသောကြောင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုလေပြေဖြစ်စေသည်။ ငါဒီ faucet အမျိုးအစားသေတ္တာစတိုးဆိုင်များမှာရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ နှိုင်းယှဉ်ယူနစ်အပေါ်စျေးနှုန်းများငါ့ဘတ်ဂျက်၏ကန့်သတ်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ဤသည် faucet ငါလိုချင်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးရှိပြီးအစိုင်အခဲကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့စျေး၊ ကြီးတဲ့ဆေးပါ။
ငါသည်ငါ့ faucet ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူချစ်။ ငါ့မပြီးဆုံးသောမီးဖိုချောင်ပေါ်မှာperfectlyုံအကြီးအလက်ျာဘက်အမှုတော်တို့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အခြားဝယ်ဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်အပြည့်အဝမထိုက်မတန်အကျင့်ကိုကျင့်။
D *** ဎ2020-06-14
ဒီ faucet ကိုငါတို့ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာယာယီမီးဖိုချောင်ကို ၀ တ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ ကျနော်တို့အဲဒါကိုအရမ်းကြိုက်ပြီးဒီနေရာကိုနေရာအသစ်မှာသုံးမယ်။ အလွန်ကြံ့ခိုင်, အရည်အသွေးမြင့်ဆောက်လုပ်ရေး, ပလပ်စတစ် -bits မျှ။ ရေမှုန်ရေမွှားမှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောအလျားလိုက်၊ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူ၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်ပလပ်စတစ်အမြောက်အများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော“ နာမည်” တံဆိပ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်အတွက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ $$ များအတွက် Excellent က faucet ။
တစ်ဦးက *** s ကို2020-06-17
ငါက "စျေးပေါတဲ့ပလတ်စတစ်" နဲ့တူမယ်လို့ထင်ပြီးအနည်းငယ်စိတ်ပူမိတယ်၊ ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေပါတယ်နှင့် faucet အကြီးအကြည့် !!! ငါရေဖိအားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်ငါ့ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်ရေနှင့်ပိုက်ဆံချွေတာသောဟင်းလျာများကိုစုပ်ယူသောအခါရေစီးဆင်းမှုကိုပင်ခဏရပ်နားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ငါ့မှာနှစ်ဆမြုပ်နေသောကြောင့်ကြီးမား။ အဆင်ပြေသည်။
တစ်ဦးက *** ဏ2020-06-24
ဒါကတကယ်တော့စူပါကောင်းတဲ့ ၀ ယ်ခြင်းပဲ။ အမှန်တကယ် install လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းကဒီပစ္စည်းပစ္စယသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းကိရိယာကတကယ့်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ လွယ်လွယ်ကူကူစုစည်းနိုင်ပြီးအရာအားလုံးအစားထိုးဖို့သန့်ရှင်းရေးအပါအ ၀ င်နာရီဝက်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။ အသုံးပြုခြင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်အပူမှအအေးပြောင်းခြင်း၊ ရေမှုန်ရေမွှားလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆန့်ခြင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ အလေးချိန်ဘောလုံးသည်စမတ်ကျသည်။ ဤနည်းပညာကိုနှစ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုမည်သို့တွန်းအားပေးနေသည်ကိုနှစ်သက်သည်။
တစ်ဦးက *** င2020-06-27
ယူနစ်နှင့်အတူအလွန်သဘောကျသည်။ အပြီးသတ်လှပသည် ငါမှတ်ချက်ပေးရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာလက်ကိုင်သည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့် faucet ကိုဖွင့်သောအခါသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါကုမ္ပဏီနှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အပေါ်သူတို့ပြုခဲ့သည့်နောက်ဆက်တွဲအပေါ်အတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။ အစဉ်အဆက်လိုအပ်လျှင်ကျိန်းသေနောက်တဖန်ဝယ်ယူလိမ့်မယ်။
L ကို *** ဌ2020-06-29
ငါ့ faucet အသစ်ကိုငါချစ်တယ်။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်က installed ။ မီးကြိုးများတပ်ဆင်ရန် မှလွဲ၍ ခက်ခဲလွန်းသည်။ အကယ်၍ သင်လုပ်နိုင်လျှင်, faucet ကိုနေရာမချခင်တွဲပါ။ ငါ့နစ်မြုပ်အောက်မှာရှိတဲ့နေရာကကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းမြဲရှိနေလို့မိုင်းလုပ်ဖို့ပိုခက်တယ်။ အခြားအပြင်ကချောချောမွေ့မွေ့သွား။ ငါသစ်ကို faucet ချစ်ကြတယ်!
J ကို *** t ကို2020-07-02
ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ပါတယ် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ငါတို့မှာကလေးငယ်တွေရှိတယ်၊ သူတို့သုံးဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူတစ် ဦး ၏အကြံပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပြီး၊ ရှေ့သို့ဆွဲရန်ပူသောနောက်ပြန်တွန်းခြင်းနှင့်အအေးပေးခြင်းဖြစ်ရန်ပြန်လည်သုံးသပ်သူ၏အကြံပေးချက်ကို လိုက်၍ ပူ / အအေးဆက်သွယ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်ငါကျိန်းသေဒီထုတ်ကုန်အကြံပြုလိမ့်မယ် !!
B က *** ဌ2020-07-06
ငါငါ့ခွေးဟောင်းကိုမီးဖိုချောင်ထဲမှာအစားထိုးချင်တယ်။ ဒီအစုံဟာလုံးဝလှပပြီးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်အတွက်အနည်းငယ်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည် (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နစ်မြုပ်နေသောအင်တုံသို့တင်းကျပ်ရန်လိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီတောင်းခံရန်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုတောင်းရန်လိုအပ်သည်) သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့ပြီး faucet သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါစုပ်အင်တုံပက်ဖြန်းများအတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးသော faucet ခေါင်းကိုချစ်ကြတယ်။ ထိုအရာသည်ဘာအရာအတွက်သေချာမသိသော်လည်းချည်မျှင်လက်အိတ်တစ်စုံဖြင့်ဝယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထုပ်ပိုးအလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့, ငါအပေါင်းတို့သည်ပတ်ပတ်လည်ငါ့ဝယ်ယူအပေါ်အလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်!
J ကို *** င2020-07-09
ငါတကယ်ဒီစျေးနှုန်းမှာ faucet ဒီကောင်းသောဖြစ်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အချို့လူများကပစ္စည်း၏ပလပ်စတစ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ ကုန်ကြမ်းသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ဟုခံစားရသော်လည်းဤစျေးနှုန်းဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းသည်သံမဏိကဲ့သို့ခံစားရသော်လည်း၎င်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ ကြာရှည်ခံပါကအချိန်သည်သာဖြေနိုင်သည်။ အဆိုပါ faucet သည်အခြား faucets ကဲ့သို့တိုးချဲ့ခေါင်းကိုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါသူတို့နွေ ဦး ကိုမသုံးခဲ့ဘူးဒါကြောင့် ဦး ခေါင်းသည်အခြားသူများကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းပြန်မထားဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေရောက်ရှိ, ထုပ်ပိုးကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တတ်နိုင်သော faucet ရှာနေလျှင်အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
H ကို *** မီတာ2020-07-13
ငါအိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်နှင့်မီးဖိုချောင်စုပ်အဟောင်းသည်ဟောင်းသွားသည်၊ ငါပန်းချီကားပြီးသွားရင်ဒီ faucet အသစ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ခေတ်သစ်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပေးသည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည် (လမ်းညွှန်များအတိုင်းလိုက်နာပါ)
တစ်ဦးက *** t ကို2020-07-17
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အားလုံး function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ Standard chrome finish မှလက်နှစ်ချောင်း၊ လည်ပင်းအနိမ့်မီးဖိုချောင် faucet သို့ဆန့်ကျင်ဘက်နီးပါးသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်ကြည်နူးဖွယ်ပါတကား။ စျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် စီမံရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်။
M က *** တစ်ဦး2020-07-19
လှပသော, ကောင်းစွာလည်ပတ် faucet
အီး *** ဎ2020-07-22
ကောင်းပါတယ် စျေးနှုန်းများအတွက် Awesome ကိုတန်ဖိုး။ ငါတို့ faucet ကိုအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲချင်တယ်။ ဒီဟာကအလုပ်လုပ်တယ်။ ပက်ဖြန်းဆွဲမထားဘူး ကောင်တာအလေးချိန်ကိုစနစ်တကျနေရာချထားပါ။
: D *** ဃ2020-07-27
အဆိုပါ faucet ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပါလျှင်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အဲဒါကိုထည့်သွင်းဖို့မြေပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းဖို့လိုတယ်။ သို့သော်အကျိုးနပ်ပါသည်။
ကို C *** ဌ2020-07-31
ငါဒီဝယ်ဖို့စိတ်မချရသောစျေးနှုန်းအတွက်ပြောရလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တာဝမ်းသာပါတယ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုအများအားဖြင့်မရေးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်မေ့လျော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်ကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်အချိန်ယူခဲ့ပါက၎င်းသည်ထိုက်တန်ရုံမျှသာဖြစ်သည်၊ သင်၏ဘတ်ဂျက်တွင်အခြားသူများကိုသင့်အိမ်ကိုပြုပြင်နေစဉ်အတွင်းဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်စေလို
အကောင်းတစ် faucet များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်း။ ငါ pause ဆိုတဲ့ feature ကိုကြိုက်တယ်။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကဒီကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်ရရှိသောဒုတိယဆေးပါ။
L ကို *** ဋ2020-08-09
ပိုက်ဆံများအတွက်လျောက်ပတ်သော faucet ။ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေပိုက်ပြင်စက်များမလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းရွေ့လျားဖို့မျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါကမီးဖိုချောင်အတွက်စျေးပေါတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုပဲ
B က *** င2020-08-
ငါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းကိုယူ။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုချောင်များအတွက်အံ့သြဖွယ်အဆင့်မြှင့်ကြီးနှင့်စျေးကြီးသေတ္တာစတိုးဆိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းမယုံနိုင်စရာပါပဲ။
N ကို *** r2020-08-15
ကျိန်းသေအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝယ်ယူ။ တကယ့်စျေးကြီးပြီးကြည့်ရလွယ်ကူသော၊ အဆိုပါ extension ကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ အပြီးသတ်ကိုချစ်။ ငါ့အမေကဒီလိုချင်ခဲ့တယ်၊
N ကို *** r2020-08-17
နက်ရှိုင်းသောအဝတ်လျှော်ရုံလိုအပ်သည် ကိရိယာများကိုသာတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ Phillips ဒရိုင်ဘာ။ အဘယ်သူမျှမပေါက်ကြားတက်ချိတ်နှင့်ကျယ်ပြန့်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ပါတယ်။
, G *** မီတာ2020-08-19
ဤသည် faucet ငါ့အသက်ကိုပြန်အသက်ဝင်စေ! ကောင်းစွာလုပ်နှင့် install လုပ်ဖို့စူပါလွယ်ကူ! ကျွန်ုပ်မှာယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်ပြissuesနာလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ !
: P *** ဇ2020-08-24
ငါအိမ်အသစ်အတွက် ၂ လုံးဝယ်ရန်အတွက်တိုက်ခန်းတစ်လုံးဝယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကြည့်ရတာအံသြစရာကောင်းတယ်။
Y က *** y က2020-08-28
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသင်လိုအပ်သမျှပါ ၀ င်သည်။ ဤငွေသည်အလွန်တန်ဖိုးကြီးသည်၊ ဈေးနိမ့်သည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါနှင့်။
M က *** င2020-09-03
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ရေသန့်စက်ကဲ့သို့သောပိုက်များမတပ်ဆင်ထားပါကအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ငါမှာလည်းစင်ပေါ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်မစီးနိုင်လို့သင့်ရဲ့နစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်အောင်လုပ်ပေးပါ။ Faucet သည်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝသဘောကျတယ်
: D *** ဌ2020-09-10
ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင်စုပ် update လုပ်ဖို့ဒီ faucet ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုငါ့အတွက်ပေးခပေးတာငါ ၀ မ်းသာမိတယ်။ ငါ arounde စျေးဝယ်။ လှပသော Faucets ။